Mujaahid Xuseen Aadan Cadde oo Ka Sheekeeyay Guda-galkii Hargaysa 1988-kii Iyo Waayihii Adkaa Wakhtigaas Jirey
(Hadhwanaagnews) Thursday, August 09, 2018 15:25:36
Hargeisa(HWN):-Mujaahid Ibraahim Dhaga-weyne waxa loo soo sheegay oo Ciiddankii iyo dadkii kale ee imannaayay ay soo sheegeen in Mujaahid Maxamed Cilmi Samatar iyo Alle ha u naxariistee Mujaahid Aadan Cadde uu Caddowgii qabtay, markii warka caynkaasi uu Dhaga-weyne soo gaadhay, waxa uu qaatay go’aan, waxaannu kaxaystay Ciiddammo aan ka mid ahaa anigu (Mujaahid Xuseen Aadan Cadde), annagoo u dhaqaaqnay dhinaca Waqooyi. Intii aannu jidka ku sii jirnay waxa naga horyimid Gaadiid ka yimid dhinaca Djibouti oo taaggan tuullada ku xigta magaalada Hargeisa, waxaannay Gaadiidkaasi na siiyeen Gadbad Sonkor ah iyo mid Barriis ah.
Ciiddankii uu watay Mujaahid Ibraahim Dhaga-weyne waannu sii soconnay, annagoo aan
runtii si fiican u garanaynin meelaha aannu marayno amaba aannu soconnay, inkastoo aan ka sii xasuusto Magacyadda tuullooyinkii aannu sii marnay tuulo la yidhaahdo Maluugta, Diirato iyo tuullooyin yar yar oo aannan hadda si fiican u xasuusan karrin. Waxaannu ku soo laabannay Geed deeble, markaas waxaannu ugu nimid Nimankii Farsamayaqaannada Biyaha ahaa oo isugu jira Shiinne (Chinese), iyo soomaali isugu jira, halkaas waxaannu ka helnay laba gaadhi oo ay Shiinnuhu leeyihiin, dabaddeedna Kurtaannu ka jarnay markiibba oo laba Qorri ayaannu saarnay. 3/06/1988-kii ayaannu ku soo noqonnay Hargeisa Ciiddammadii iyo Tiknikaddii oo wada socda, waxaannu magaaladdii igu nimid Saddexdii taliye oo midkastaaba in yarroo Ciiddan ah haysto, markaa waxa isku yimid Ciiddammadii Sayid Cumar iyo kuwii 20aad iyo Madaxdooddii oo kala maqnaa, waxaa iyagunna isku yimid intii magaalada ku jirtay ee Guutaddii Sancaanni.
Madaxdii taliska sarre waxay Guutooyinkii Ciiddammadii SNM u qaybiyeen dhawr aag, oo guuto kasta uu Waajibkeeddu ahaa inay ka sifeeyaan Ciiddankii Faqashta ahaa, ee Alle ha u naxariistee Maxamed Siyaad Barre ku soo daad-gurreeyay magaalada Hargaysa oo ahayd xaruntii gobollada Waqooyi ee Soomaaliya.
Guutaddii Sancaanni oo ahayd Guutaddii xoogga badnayd Guutooyinkii Ciiddankii SNM, waxaanna loo xil-saarray Xaafaddaha Gacan Libaax, Guryo-sammo iyo Iftin, aaggaas oo ay si fiican uga sifeeyeen Ciiddankii faqashta ahaa ee ku sugnaa, waxaannay isla maalintiiba gaadheen ilaa Xaafadda Calaamaddaha iyo Garoonka diyaaraha Egal International Airport, iyagoo isku balaadhiyay Xaafaddaha Siinnay, October, ilaa Dugsigii la odhan jirey Xalanne ee ku yaallay Dunbuluq.
Ciiddammadii Sancaani ee SNM waxay Xaafadda Gacan-Libaax ka sameeyeen Ciiddan shicib ah oo Hubkooddii sita, kuwaasoo si fiican ula dagaal galay Ciiddammadii guutaddii Sancaani ee SNM, Ciiddankaas Shicibka ah waxa Madax looga dhigay Nin la odhan jirey Jaamac Qacle.
Guutooyinka Sayid Cumar iyo 20aad-nna waxa loo xil-saarray wixii ka hooseeya Idaacadda, sida 26 Jun, Jeelka wayn ee Hargeisa, ilaa agaggaarka Baar Hargaysa iyo wixii galbeed ka xigga, waannay ku adkaatay inay meelahaas oo dhan wada gaadhaan, balse dagaal qadhaadh oo maalmo socday waa laga gacan sarreeyay oo Ciiddammadii SNM ayaa guushu raacday, inkastoo Ciiddankii Faqashta ahaa aannay dad iyo duunyo u aabbo-yeelin oo ay Maddaafiic adeegsannayeen.
Mujaahid Xuseen Aadan Cadde, Guddoomiyaha gobolka Marooddijeex ee Xisbiga WADDANI